Raharaha Ambohitrimanjaka « Tsy tokony hila ady amin’ny vahoaka ny fitondrana »
Nahitsy ny teny nambaran’ny sekretera jeneralin’ny antoko Vahoaka Miray na VAMI, fa tokony hitady toerana hafa hananganana ilay tetikasa Tanamasoandro ny fanjakana,
Paositra Malagasy Notokanana ny Birao faha-255 eny Vassacos
Ankoatra ny fampahafantarana ireo karazana hajia nampiasain’ny paositra hatramin’izay dia nisy ny fitokanana ny biraon’ny paositra laharana faha-255 teny Vassacos omaly alarobia 09 oktobra.
Vao tamin’ny 19 jona ihany koa nefa no nahatrarana volamena milanja 925 grama mbola nataona vehivavy iray teratany indiana ihany. Tamin’ny 8 septambra dia vehivavy indiana hafa koa no tratehaka saika hanondrana volamena 305 grama saika hoentina atsy amin’ny Nosy Maorisy. Ankoatra izay dia tratra ihany koa ny fikasana hanondrana an-tsokosoko volamena milanja 940 grama tamin’ny talata sy alarobia lasa teo. Teny amin’ny fadintseranana Ivato avokoa no nahatrarana ireo nandritra ny fisavana entana sy vatana nataon’ireo tompon’andraikitra. Nisy ihany koa ny fikasana hampiditra basy mahery vaika tsy nahazoana alalana tamin’ny sidina iray avy any Frantsa ny volana aogositra nataona vehivavy Malagasy araka ny tatitry ny fadin-tseranana hatrany. Betsaka ihany koa ireo tsy tratra izay lasa mpanefoefo tampoka amin’ny fanondranana ny harena sarobidin’i Madagasikara.